Indlela Umbhalo a Isitshayina kubekho inkqubela nisolko Dating Asian Uthando Zephondo
Ngoko ke, ngaba anayithathela nje bamfumana Filipinas kwaye ingaba fascinated kunye zombini zabo inkcubeko yawo kwezo meko. Mhlawumbi sele baqonde ukuba imiyalezo ingaba kakhulu ebalulekileyo xa nisolko nomngeni kunye abafazi, kodwa ke, ukuba kubalulekile ngokukodwa xa nisolko ukuzama woo a Isitshayina umfazi. Njenge abafazi ezininzi kwaphuhliswa kwaye siphuhlisa amazwe, Isitshayina abafazi ingaba glued yabo phones ezininzi ixesha, kwaye omnye yakho eyona bets kuba yokufumana yakhe ingqalelo xa ukhethe yakhe inani kukuba shoot kuyo yokubhaliweyo. Kungenjalo, unako kanjalo sebenzisa omnye eziliqela Isitshayina loluntu media kwaye messaging apps ukufumana acquainted kunye entsha abafazi ngexesha nisolko kwi-China. Abantu China uthando ukusebenzisa WeChat kokuthile, ngoko ke get njengoko abantu abaqhelekileyo ngayo njengoko kunokwenzeka. Ngoku, nje kunye nezinye ezininzi emnqamlezweni-imiba yenkcubeko, kukho ukufunda igophe. Njengoko kunye uthetha ngendlela umntu, texting Isitshayina abafazi iya kuba ezahlukileyo ukususela texting Western abafazi ixesha elininzi. Makhe kuqwalasela abanye iincam kwi njani ukuba umbhalo yakho enokwenzeka Isitshayina girlfriend kwaye hayi mess izinto phezulu: Ukuba Isitshayina kubekho inkqubela ngu ukuba neentloni kwaye yenza nzima-to-get, ke idla hayi kho umthetho wakhe abazali wafundisa wakhe ukuba abe suspicious babantu ke intentions kwaye ukuba balinde herself.
I-Western umfazi abe kakuhle nawe nje ukusika ukuba nokususa kwaye ngokukhawuleza ukufumana ngesondo kwi-incoko yakho ukuba wayengomnye attracted kuwe, kodwa oku kuya ngempumelelo kuba kakhulu ama-kuba Isitshayina kubekho inkqubela kwaye babe kakuhle kakhulu jika yakhe ngaphandle. Nkqu ukuba ufuna kuphela isicwangciso kwi into casual kwaye musa ufuna ukufumana kwi ezinzima budlelwane, Asian girls bakholisa ukuba abe shyer malunga nomcimbi ka-ngesondo, ngoko ke gcina zonke ukuba kuba xa nisolko ngqo kwi private kwaye bedroom. Musa yizise phezulu explicitly phezu umbhalo, kwaye absolutely musa ukuthumela imifanekiso nantoni na phantsi iingubo zakho. Ngaphezulu, ube surprised ukuba yena uza ukwala kuni kuqala ixesha xa ucela yakhe ngaphandle. Le nto nje noko eqhelekileyo umbulelo kuye upbringing, ngoko ke ungafuna kufuneka wambetha jikelele bush kakhulu ngakumbi ukufumana yakhe ethambileyo phambi kokuba yena agrees ukuya kuhlangana nani endaweni ethile kwi-umntu.
Ke iphinde tedious, kodwa ke inxenye umdlalo kwi-China
Oku kanjalo kutheni ikunceda ukuba i-girls abakhoyo ngokukodwa anomdla dating foreigners sibe ngaphantsi”iindonga”nje kancinci. Ke iphinde nzima ukuba ukuthutha tone kunye neminye imibandela efana injongo ngokusebenzisa okubhaliweyo. Nkqu umntu, ungafumana Isitshayina girls ethabatha a ulote yakho sarcastic jokes literally, ngoko ke nibe kufuneka tone izinto phantsi ukuba isebe ukuphepha a misunderstanding. Enye indlela uphawu lwakho intentions kwaye emotions kukusebenzisa plenty ka-emojis. Uza mhlawumbi bafumanisa ukuba yena uza kusebenzisa kwabo, kakhulu ngabo kancinci ngakumbi ethandwa kakhulu kunye abantu Asian kunokuba nabo Entshona ehlabathini, ngoko ke kuya kuthabatha abanye yokufumana osetyenziselwa, kodwa lenza ezininzi evakalayo kokuqwalasela ukuba kukho ezimbalwa ezinye iindlela ukuthutha nuance. Kunjalo, ukuba kubekho inkqubela ufuna uthetha ukuba akakwazi kuthetha lick ka xhosa, nisolko kakhulu bhetele ngaphandle kokusebenzisa yakho engundoqo Isitshayina kunokuba ethabatha nethuba ngomhla wakhe akunakho decipher ntoni wena wathi, okanye worse, sebenzisa uguqulelo-software. Nangona kunjalo, ukuba kubekho inkqubela uthetha isingesi, kodwa yakho Isitshayina ayikho kakhulu okulungileyo, nje hamba ozayo kwaye umbhalo kwi-isixhosa. Kwezo meko kuba misunderstanding nje eliphezulu kakhulu ukuba ufuna kunye hayi fluent ngolwimi kananjalo entsha kwi-inkcubeko. Kanye-kanye engalunganga misunderstanding yenzekile, wena anayithathela mhlawumbi ezilahlekileyo yakho ithuba kunye kubekho inkqubela, nkqu ukuba yena kamva iza ukwazi ukuba uyakwazi ukuqwalasela okuthethwayo ukuthi into ethile i-awkward zimvo ziza ngaphezu kusenokwenzeka ukuba iilayini phakathi kwenu. Oku kanjalo ezilungileyo ixesha umzekelo-icatshulwe ukuba, ukuba ngaba aren khange fluent, get fluent. Abantu bayathanda ukuba bathethe malunga njani”lukhuni”Asian iilwimi ezikhoyo, kodwa inyaniso kukuba abekho nzima, baya ukuba nje-hluke kakhulu ukusuka Kwintshona iilwimi. Ukuba ngaba indlela Isitshayina nge-i-vula ingqondo, indlela umntwana ingaba akuba ke ukufunda yakhe yokuqala ulwimi, uza kuba i-lula ixesha oko kunokuba ukuba ngaba ayeza zisani zonke yakho yenkcubeko baggage ukusuka kweyenu ulwimi. Iyafana yintoni kukhankanywe ngasentla, zama ukuba kuya kuba clarity xa usenza izinto ngendlela imeko ka-differing cultures. Ukuba ufuna buza yakhe ngaphandle ukuba iti kwaye ukuva ukuba yena ke ilungele ukuba uthi ewe, tsiba i-innuendos uze umxelele yakhe kwi kakhulu oonombumba indlela. Ilanlekile ka-Westerners kuba ekuhendweni ukuba abe”clever”xa sukuba thetha girls, kodwa oku akusebenzi rhoqo guqulela kakuhle.
Oku kuya kuthetha ukuba uza kuba ukuba tone phantsi yakho”umdlalo”kancinci
Ngokuqinisekileyo, kodwa yakho umdlalo kuya kufuneka ukuba ibe ezahlukeneyo xa nomngeni kunye Isitshayina girls nakanjani na. Zama ukuba abe ngaphezu obvious kwaye honest malunga zinto ukuba uthi le into yokuba uninzi Isitshayina girls uza appreciate. Ingakumbi ukuba yintoni nisolko ikhangela ngu ngaphantsi ezinzima, musa ukuhamba phezulu wakhe ngelixa yena ke kunye abahlobo bakhe kwaye yenza obvious advances uza kuba esifutshane phantsi. Lona uhlobo i-ubuhle wombhalo kwi ukuba iyakuvumela ukuba zithungelana abayo discreetly kwaye akukho namnye sele ukwazi uvukile. Ezininzi Isitshayina girls ingaba attracted ukuba abavela kumazwe angaphandle amadoda, kodwa njengoko kunye uninzi girls uza kuhlangana ngayo nayiphi na inkcubeko, baya ayoyika ka-appearing ngathi ngabo”kukhulula abafazi”kwi-phambili yabo yezentlalo isangqa. Uyakwazi uphephe lo ngumthetho nje evumela yakhe ukugcina ubudlelwane ngasese ukuba yena ufuna. La ngamazwi nje ezimbalwa iincam kwi iyaqala messaging kwaye texting i kubekho inkqubela nisolko dating okanye onomdla kuso. Ngokuqinisekileyo, kuphela indlela ungafumana ngenene okulungileyo a texting umdlalo kunye Isitshayina girls ingaba ngokusebenzisa amava kwaye senzo. Ngoko ke, ukhuphele WeChat okanye omnye ethandwa kakhulu messaging app kwaye ndifune umsebenzi
← Dating Isitshayina girls
Incoko Eroma - ividiyo chatroulette jikelele dating →